Indlela ukwandisa izinwele ekhaya ngokushesha futhi kalula
amantombazane nabesifazane abaningi banesithakazelo kanjani ukwandisa izinwele ekhaya. Namuhla, kubaluleke kakhulu. Phela, izinwele amahle eside bekulokhu umthombo yokuziqhenya futhi khezekheze. Bona ukuhlobisa, nika ubufazi, zesimanjemanje kanye umsungulo, lwaya, imfihlakalo futhi, yebo, ubulili. Nokho, ne ukungena fashion ezihlukahlukene zezinwele short abesifazane abaningi bamane nje abakwazi ukubuyela izinwele ababengabafowabo. eside, ngoba izinwele zikhule nzima impela: kuthatha isikhathi esiningi futhi ukubekezela.
Kungakhathaliseki ukuthi kuyadingeka ukwandisa izinwele zakho? Yiqiniso, u-yebo! Phela, ngakho ngeke ukwazi nje uzizamele indlela bese uzama into entsha, kodwa futhi ukuzijabulisa wona, ekubeni bahle ngokwengeziwe. Ngaphezu kwalokho, izandiso izinwele kuzosiza labo amantombazane abe izinwele zabo siqu sikhule ezingavamile noma okubi, ngoba ekuqaleni ukuhlukanisa.
Umbuzo ka kanjani ukwandisa izinwele ekhaya, kuyinto efanele futhi ngesizathu ukuthi nokucwala lokhu Inqubo ngempela eqolo. Futhi ukuluma nje amanani kuphela imicu yokufakelwa yokwakha, kodwa futhi ku umsebenzi uqobo onguchwepheshe. Ngakho-ke, abaningi musa alinge ukuthatha lesi sinyathelo, zikhetha ukulondoloza.
Ngakho, ukwandisa izinwele ukuze nezinwele ezimfishane (futhi isikhathi eside kakhulu) ngezindlela eziningana. Okokuqala, lena indlela esishisayo (owaziwa nangokuthi i-English). Iqiniso lokuthi imicu nge resin ekhethekile ethe njo izinwele. Futhi akukho imishini ekhethekile liyadingeka. Indawo kunenze nisondelane akusilo obonakalayo (lokhu ibhola kancane ezincane kuno uhlamvu irayisi). Ngakho-ke kuvela izinwele Lihle futhi emuhle.
Indlela yesibili wekhono esishisayo is the kangaka okuthiwa "Italian". Isebenzisa amaphilisi ekhethekile Yakhiwa yi-keratin, okuyinto okondliwa kulo izinwele. Imicu inamathelisiwe usebenzisa okufanayo ekhethekile lisebenze kagesi.
Kunezindlela cool, lapho izinwele unamathele esebenzisa amaphilisi kanye ezincane metal izindandatho. Kukhona tape umthamo, lapho imicu bomdabu tape ekhethekile ingcina nje ethe njo yokufakelwa. Le ndlela silula, kudinga isikhathi esincane futhi udinga Lutho neze zamakhemikhali, noma yiphi impahla ekhethekile futhi ubuchwepheshe eziyinkimbinkimbi. Eyodwa yezindlela ethandwa kakhulu ubuye "Spanish". Nalapha futhi, kusetshenziswa glue akhethekile hardener. Ngenxa yalokho, akunakwenzeka ukuqonda lapho ukuphela kwabo imicu futhi baqala yokufakelwa.
Indlela ukwandisa izinwele ekhaya? Kungcono iphendukele itheyiphu njalo accrual, njengoba kunjalo kutsi kube melula kutisebentisa, fast and ukonga, futhi Akudingi izinto ezikhethekile kanye nemishini, akukho amakhono ezikhethekile. Le kit siqukethe emapheshana amane ububanzi 4 cm. Bonke Banamathele izinwele bomdabu tape ekhethekile ingcina ne ingcina isakhiwo (kungalimazi noma izinwele noma sezinwele, ngakho akudingeki sikhathazeke kule akhawunti). Ububi kuphela yaleli su: isikhala ngokuhlanganyela lungabonakala, ukuze Strand engenhla kungcono hhayi ukulungisa izinwele yokufakelwa. Ngaphezu kwalokho, banakekele izinwele kungenzeka kuphela esebenzisa umenzi, ezivuma ukusetshenziswa sivala. Ukulungiswa kufanele kwenteke lokungenani kabili ngenyanga. Izikhiye kufanele enamathiselwe kube eduze izimpande, ngoba izinwele zabo siqu njalo sikhule. Le ndlela kuyinto umnikazi ofanele kakhulu curls ababuthakathaka, abangondlekile futhi mncane.
Ngakho, umbuzo kanjani ukwandisa izinwele ekhaya, esiphethweni. Azonakekela sivala ulula - badinga uqaphe kakhulu ukugeza ngigeza, musa ungatshekisa ikhanda phambili bezihlikihla yokuwasha ku ezimpandeni. Ngemva kwalokho, kungcono ukusebenzisa namafutha ekhethekile. Nekama izinwele zakho kahle. Sleeping nezinwele ezimanzi akuvunyelwe nakancane.
Ivolumu styling izinwele naphakathi: Master Class
Reveur - isizukulwane esisha imoto. Uhlolojikelele
Bob ukugunda izinwele side - njengabesifazane futhi zisebenza kahle.
Kwekhanda isitayela Greek
Izinwele nezandiso nezinwele ezimfishane kuyindlela engcono
Haircuts amadoda kwesitayela sika: imfashini 2013
Ngazi kanjani esele Savings Bank kumephu nge-Internet, i-SMS noma i-ATM?
'Finalgon' amafutha. imfundo
Car "Zaporozhets": izici, tinkhulumo, umlando kanye nokubuyekeza
Slutsk ibhande - a gugu lesizwe waseBelarus. Museum of Slutsk amabhande
Ukuphunyuka test umlilo, imvamisa lokhu kuhlolwa
Amasongo Magnetic: okuhle nokubi. Ukuphulukisa Amasongo
Riddle mayelana apula - izingane nabazali bazo
Ihhotela Izibuyekezo Grand Yazici Marmaris Palace
Imidlalo ye-TV thwebula
Makeup redheads: izici, ubuchwepheshe, umehluko wemisindo nemiqondo yamagama kanye nezincomo ochwepheshe